Shiinaha Customized Bacda Qalabka Qoyska-saareyaasha, Shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > > Bacda qalabka > Bacda qalabka guriga
Bacda qalabka guriga
(1) Haddii aad heshay aaladda ugu habboon, waad ka boodi kartaa qaybtaan, kaliya dalbo boorsada aad jeceshahay oo ku raaxee boorsada qalabka guryaha cusub. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan wali garanayn midka aad dooranaysid, markaa waxaan ku siinayaa talooyin kaa caawinaya inaad go'aan gaarto. Kahor iibsiga kiishka qalabka guryaha, waxaad u baahan tahay inaad ka fiirsato waxyaabaha qaarkood. (2) Naqshadda furitaanka: afkaaga fur, afkaaga fur, ama si kastaba ha noqotee, tani aad ayey muhiim u tahay. Bacaha qalabka badankood waxay leeyihiin. Sida aad arki karto, dhammaan qalabka ku jira liistadayada boorsooyinka qalabka guryaha ugu fiican ayaa leh. Taasi waa sababta oo ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad keydiso qalab dheeri ah, waxaan kaliya u isticmaalaa qalabka korontada, laakiin sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa qalab yar. Goobta furan sidoo kale qalabkaaga way qallajin doontaa.
1. Qalabka ugu fiican ee boorsada lagu hayo - qalabka qalalan:
(1) Boorsooyinkan qalabka guryaha wanaagsan leh, kaliya ma difaaci karaan qalabkaaga waxayna kaa caawin karaan inaad si fudud u qaadatid, laakiin sidoo kale qalabkaaga / alaabadaada kale way qallajin karaan. Tani waxay si gaar ah waxtar ugu leedahay koronto yaqaannada u baahan inay adeegsadaan aaladaha qalajinta, xerooyinka u baahan inay dharkooda qallalaan, ama qof kasta oo doonaya inuu qalajiyo. In kasta oo ay tahay inaad markasta hubiso haddii sheygu qalalan yahay kahor isticmaalka
(2) Xagga booska, boorsadani waxay leedahay jeebado ku filan. Jeebooyinku waxay ku yimaadaan cabbirro kala duwan, haddii aad isticmaasho aalado cabbirro kala duwan ah (sida leylis, xirmo, iwm), tani wax badan ayey kaa caawin doontaa Tani waxay sidoo kale leedahay naqshad furan. Waxaan badanaa u isticmaalaa inaan ku keydiyo qalabka waaweyn, sida qoriga kuleylka, laakiin sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa qalab yar maxaa yeelay waxay leedahay meel ku filan. Bartamaha boorsada waxaa lagu ilaaliyaa jiinyeer.
(3) Waxay leedahay suunka garabka oo la hagaajin karo oo kaa caawin kara inaad ku dhex wareegtid bacda markaad alaab culus sidato, iyo markii culeysku khafiif yahay, waxay kaloo leedahay gacan caag ah oo dhejis ah oo dhejis ah.
(4) Guud ahaan way fiican tahay. Marka ay tahay inaan qaado qalab waaweyn (sida layliyo koronto, qoryaha kuleylka, iwm.), Caadi ahaan waan istcimaalaa. Bacda salka ugu jirta waa mid aan biyuhu xirneyn oo u adkeysanaya xirashada, taasoo bacda ka dhigeysa mid qalalan oo nadiif ah.
(5) Bacda qalabkani waxay aad ugu habboon tahay isticmaalka guriga.
(6) Haddii aad raadineysid boorso qalab oo leh saldhig aan biyuhu kujirin laakiin isla mar ahaantaana ay ku filan tahay aaladaha badankood, markaa bacda qalabka FOFRER ayaa ah doorashadaada ugu fiican. Boorsada qalabka waxay kujirtaa 30 jeeb adag oo boorsada kujira, 10 dibada ah, iyo 6 kale oo jeeb ah oo loogu talagalay xirmooyinka, joornaalada, iwm. Laakiin tan kaliya maahan.
(7) Boorsadani sidoo kale waxay isticmaashaa naqshad afka furan. Furitaanku asal ahaan waa meel furan oo ku taal bartamaha boorsada halkaasoo aad dhigan karto qalab badan. Aaggan waxaa lagu ilaaliyaa jiinyeer laba-jiid ah oo ka hortagaya aaladaha inay qulqulaan waxayna kaa caawinayaan inaad si wanaagsan u abaabusho qalabkaaga
(8) Waxay ka samaysan tahay maro laba-lakab ah; 600D iyo 1680D dhar caag ah. Labada qalabba waxaa loo yaqaanaa adkeysi iyo kalsooni. Tan ugu muhiimsan, waxay sidoo kale leedahay biinanka wanaagsan, oo kordhin kara nolosha qalabka.
2. Xaddidyada alaabta (qeexitaannada) xirmooyinka qalabka guryaha
3. Waxyaabaha ay tahay in laga fiirsado ka hor intaadan iibsan boorsada qalabka guryaha lagu qaato?
(1) Haddii aad heshay aaladda ugu habboon, waad ka boodi kartaa qaybtaan, kaliya dalbo boorsada aad jeceshahay oo ku raaxee boorsada qalabka guryaha cusub. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan wali garanayn midka aad dooranaysid, markaa waxaan ku siinayaa talooyin kaa caawinaya inaad go'aan gaarto. Kahor iibsiga boorsada qalabka guryaha, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso waxyaabaha qaarkood.
(2) Naqshadda furitaanka: fur afkaaga, kala qaado afkaaga, ama sikastaba, tani waa mid aad muhiim u ah. Bacaha qalabka badankood waxay leeyihiin. Sida aad arki karto, dhammaan qalabka ku jira liistadayada boorsooyinka qalabka guryaha ugu fiican ayaa leh. Taasi waa sababta oo ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad keydiso qalab dheeri ah, waxaan kaliya u isticmaalaa qalabka korontada, laakiin sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa qalab yar. Goobta furan sidoo kale qalabkaaga way qallajin doontaa.
(3) Dhismo: Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad iska hubiso ayaa ah in bacda agabku yahay mid aan biyuhu xirin. Si kastaba ha noqotee, dhammaan boorsooyinka aan soo taxnay waxay leeyihiin saldhig aan biyuhu lahayn, marka uma baahnid inaad ka walwasho arrintaas. Waxa kale ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso waa qaabka bacda. Waxaad u baahan tahay boorso aan dhici doonin ama foorari doonin. Sababta tani waxay tahay haddii aad ka shaqeysid meel qoyan, fursadda boorsada ay ku buuxsato aaladda ayaa sareysa. Sababta ugu weyn ee loo iibsado boorsada qalabka guryaha lagu isticmaalo waa in gudaha qalabku uu ahaado mid qalalan oo nadiif ah.
5. Baakadaha iyo keenida qalabka guryaha
(2) Cabirka baakadka ee caadiga ah: dherer 25cm X dherer 20cm X ballac ah 43cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 28cm X 22cm X 55cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 17Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 15Kg.
Calaamadaha kulul: Boorsada qalabka guryaha, Shiinaha, soo saarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, la qaabeeyey, qiimaha, oraahda, keydka
Bacda qalabka biyuhu ka galaan
Bacda qalabka suunka